Yakha ngo-1990 nguMongameli wase-US kunye neCongress
UHarriet Tubman wasinda ebukhosini bentetho kwaye wabakhokela amanye amakhoboka angaphezu kwama-300 enkululeko. U-Harriet Tubman wayeqhelana nabaguquleli bezenhlalakahle kunye nabaqhelisi bexesha lakhe, kwaye wayethetha ngokuchasene nobukhoboka kunye namalungelo amabhinqa. UTubman wafa ngo- Matshi 10 , 1913.
Ngo-1990 i-US Congress kunye noMongameli uGeorge HW Bush baqala ukuvakalisa uMatshi 10 ukuba babe yiHarriet Tubman Day. Ngowe-2003 iNew York State yasungula iholide.
Iinkcukacha ngokubanzi zeHarletet Tubman
IHarriet Tubman Iifoto kunye neMifanekiso
Imbali YaseMerika YaseMerika kunye nabasetyhini - Isihlandlo
UMthetho woLuntu 101-252 / Matshi 13, 1990: 101ST Congress (iSJ Res 257)
Ukumisela uMatshi 10, 1990, njenge "Harriet Tubman Day"
Nangona uHarriet Ross Tubman wazalelwa ebukhoboka eBucktown, eMaryland, okanye ngasekupheleni konyaka we-1820;
Nangona wasinda ebukhoboka ngo-1849 waza waba "umqhubi" kwiSitrato esingaphantsi komhlaba;
Nangona wathatha iindwendwe ezilishumi elinesibhozo njenge-conductor, enzame nangona ubunzima obukhulu kunye nenengozi enkulu yokukhokela amakhulu amakhoboka enkululeko;
Nangona uHarriet Tubman waba isithethi esicacisayo kunye nesisebenzayo egameni lentshukumo yokuphelisa ubukhoboka;
Nangona wayesebenza kwiMfazwe yoLuntu njengejoni, inhloli, umongikazi, ukuhlola, nokupheka, kwaye njengenkokeli ekusebenzeni nabakhonzi abasanda kukhululwa;
Nangona emva kweMfazwe, waqhubeka elwa nesithunzi somntu, amalungelo omntu, ithuba kunye nobulungisa; kwaye
Nangona uHarriet Tubman-onobukroti kunye nokuzinikezela kwakhe isithembiso seMelika kunye nemigaqo eqhelekileyo yobuntu iyaqhubeka nokukhonza nokukhuthaza bonke abantu abaxabisa inkululeko-bafa ekhaya lakhe e-Auburn, eNew York, ngoMatshi 10, 1913; Ngoku, ngoko, makube njalo
Ukugqitywa yiSenethi kunye neNdlu yabameli be-United States yaseMelika kwiCongress yabuthana, Ngo-Matshi 10, ngo-1990 bonyulwe ngokuthi "Usuku lweHaretet Tubman," ukuba lujongwe ngabantu baseMerika ngokuphathelele imikhosi efanelekileyo kunye nemisebenzi.
Ivunyiwe ngoMatshi 13, 1990.
UMSEBENZI WEZEMISEBENZI - ISJ Res. 257
Ingxelo yeCongress, Vol. 136 (1990):
NgoMatshi 6, iqwalaselwe kwaye idluliselwa kwiSénate.
NgoMatshi 7, ucatshangelwe kwaye idluliselwa kwiNdlu.
Ukusuka kwiNdlu eNtshonalanga, isayinwe ngu "George Bush," nguMongameli we-United States:
Isimemezelo 6107 - Usuku lweHartiet Tubman, ngo-1990
Matshi 9, 1990
Ekubhiyozeni ubomi bukaHaretet Tubman, sikhumbula ukuzinikela kwakhe kwinkululeko kwaye sibuyele kwiimigaqo engapheliyo ayenzima ukuyixhasa. Ibali lakhe lenye yenkalipho engavamile kunye nokusebenza kwintsebenzo yokuphelisa ubukhoboka nokuqhubela phambili iingcamango ezintle ezifakwe kwisiBhengezo soKhuseleko sesizwe sethu: "Sibambe ukuba ezi nyaniso zibonakalisa ukuba bonke abantu badalwa ngokulinganayo, ukuba banikwe nguMdali wabo ngamalungelo athile angabonakaliyo, oku phakathi kwabo kuBomi, inkululeko kunye nokuphandle. "
Emva kokusinda ebukhoboka ngo-1849, u-Harriet Tubman wahokela amakhulu amabutho amakhoboka enkululeko ngokwenza iindwendwe ezi-19 ezidlulileyo kwiindawo zokucasha ezibizwa ngokuba yi-Underground Railroad. Ngemizamo yakhe yokuncedisa ukuqinisekisa ukuba isizwe sethu sihlala sihlonipha isithembiso sayo senkululeko kunye nethuba kubo bonke, waziwa ngokuba "uMoses wabantu bakhe."
Ukukhonza njengomongikazi, ukuhlola, ukupheka kunye nokuhlola i-Union Army ngexesha leMfazwe yombango, uHarriet Tubman wayehlala ebeka umngcipheko inkululeko yakhe kunye nokukhusela ukukhusela abanye. Emva kwemfazwe, waqhubeka esebenzela ubulungisa kunye nesizathu sesithunzi sabantu. Namhlanje sinombulelo ngokukhululekileyo kwimizamo yalo mfazi onesibindi nozingenabugovu -baye waba ngumthombo wokuphefumlelwa kwizizukulwana zaseMerika.
Ukuqatshelwa kweendawo ezikhethekileyo zikaHarriet Tubman ezintliziyweni zabo bonke abathanda inkululeko, iCongress idlulisele iSanate Joint Resolution 257 ekukhunjweni kwe "Harriet Tubman Day," ngo-Matshi 10, 1990, iminyaka eyi-77 yokufa kwakhe.
Ngoku, ngoko, mna, uGeorge Bush, uMongameli we-United States of America, ngaba nichaza ngoMatshi 10, ngo-1990, njengoSuku lweHaretet Tubman, kwaye ndibiza abantu baseUnited States ukuba bagcine le mini ngemikhosi efanelekileyo kunye nemisebenzi.
NgamaNgqina apho, ndibeke isandla sam ngomhla we-9 kaMatshi, ngomnyaka weNkosi yethu elinamanci asibhozo anesithoba, kunye ne-Independence yase-United States yaseMerika ngamakhulu mabini anesine.
IziFrentshi zeziFundo zesiFrentshi
I-Flash Fiction esuka eBaudelaire eya kuLydia Davis
Iinjongo zoMbutho woMama